DC Gear Motor amidy, maotera maotera maotera dc avo lenta
DC Gear Motor amidy, maotera maotera maotera maotera dc
Fitaovana kiririoka spiral
Hetsika fanosotra helika
Ireo moto an'ny planeta
Spor Geared Motors
Cyclloid Geared Motors
Hetsika geared Hypoid
Spider Bevel Geared Motors
Fizarana sy singa
Fanamafisana maotera môtô ivelany
Fanamarihana bebe kokoa
Kitapo ankavanana ankavanana
Boaty maotera elektrika
Ny planeta Gear Set
Motera 3 dingana
Masera mangatsiaka kokoa
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha maotera
Toro moto arak'asa
Fiaraha-mandeha an-tsokosoko tokana
5 HP Electric Motera
Moto maotera AC
Motor motor 2hp
3hp motera tokana
Motera herinaratra 10 hp
Motor motor induction 3
Kitapo fanamafisana haingam-pandeha
Moto Induction Induction
Jiro mandeha amin'ny herinaratra amidy
Motera AC Samll
Tariho ny motera misy ankehitriny
Môtô mandeha roa
Fitaovana reducer haingam-pandeha
Vakansy hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha
Ho an'ny Gearboxes
Ho an'ny Motors Geared
Ho an'ny Motors Electric
Motor Gear kely
DC maotera 100 rpm
Ny motera DC 24v
Môtô an'ny DC miaraka amin'ny encoder
Fitantanam-bola sy banky
Motor motor maotera
Aiza no ahazoako ny vokatra manondro?
Ahoana ny momba ny kalitao DC Gear Motors anao?
Ahoana ny fomba fisafidianana motera DC Gear marina?
Ahoana no fomba haha ​​lasa agence anao?
Mila mitady hevitra momba ny orinasanao ve ianao?
Ny Sogears Manufacturing and Engineering dia niasa hatramin'ny 1993, ny famolavolana sy ny famolavolana maotera maotera miloko avo lenta maharitra. Fampisehoana ambony ho an'ny indostria rehetra. Ny antoka azo antoka.
Manana ny traikefa avy amin'ny teknolojia mandroso vahiny, ny fitaovana mandroso, ny ekipa mpitantana matihanina ary manatanteraka ny fizotran'izany isika, saingy mifanaraka tsara amin'ny iso9001 / ts16949 mifehy ny famokarana, noho izany dia miantoka ny kalitaon'ny vokatra vita tsirairay.
Aiza no hahitako ny mombamomba ny orinasa tsy miankina?
Raha "ny vidiny mirary, ny fotoana fandefasana haingana" hametrahana laza tsara eo amin'ny mpanjifa, ny orinasa dia manana mpampiasa sy mpanamboatra an-trano marobe mba hananganana fifandraisana matanjaka eo amin'ny famatsiana sy ny fangatahana. raha ny 90% ny vokatra avy ao amin'ny orinasa dia alefa any amin'ny firenena miray, germany, japan, italy, malaysia, australia, afovoany atsinanana ary ireo firenena sy faritra hafa. nidera ny mpampiasa. Noho izany, raha liana amin'ny fiaraha-miasa aminay izahay, afaka mametraka ny mpanjifanay ao amin'ny firenenao izahay handefa santionany ho anao momba ny toetoetra na afaka mandefa anao mivantana.
Manao ahoana ny halehiben'ny ekipa tetikasa?
Ny rafi-pamokarana kalitao avo lenta dia fanomezan-toky ny fahatongavan'ny fampisehoana.Ny orinasantsika manaraka ny tanjon'ny fitantanana ny kalitao voalohany, ny fanta-daza ambony indrindra .Ny motera avo lenta ny motera dc namboarina dia natao ho an'ny roa tonta sy ivelany. Izy ireo dia manana fiasa mangina, famolavolana haingam-pandeha ary onjam-peo matevina, manatanteraka mihoatra ny antenaina. Ireo lafin-javatra ireo dia nohatsaraina fotsiny miaraka amin'ny safidy avoakany.
Ahoana ny fomba fisafidianana moto DC mety?
1. Fantaro ireo fitakiana ataonao.
Ny dingana voalohany amin'ny fisafidianana ny motera dc gearer dia ny famerenana indray ny fepetra takinao. Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ireto manaraka ireto:
Fepetrahana ankapobeny: haben'ny valopy, fametrahana orientation, karazana habe sy habe, overhung sy sisiny, ary karazana lubrication.
Loharanom-pahefana fidirana: Volonta, frekuensi (Hz), ambony indrindra (Amps) ary karazana fifehezana, raha ilaina izany.
Ny karazana Gearmotor: haben'ny lanjany, ny haavon'ny tabataba, ny fatran'ny fiainana ary ny fikojakojana.
Fampisehoana gearmotor: hafainganam-pandeha, torapasika, fihodinana adidy, horsepower, fanombohana ary fanondrahana fiara (feno tanteraka).
Tontolo iainana: dc gear motor miaraka amin'ny encoder, Application ary mari-pahaizana ambient, ary mari-pahaizana fiarovana amin'ny ingress (IP).
2. Safidio ny motera maotera dc mety.
Manaraka, ampiasao ny lisitry ny fitakiana fangatahana ary ampitahao amin'ny mombamomba ireo karazana karazany ankafizinao ireo toy ny unmistes un universite, tsy miboridana na maotina vita amin'ny vy. Satria ny fampiharana tsirairay dia manana ny mampiavaka azy sy ny fangatahana azy manokana, zava-dehibe ny manamarika hoe inona ny lafin-javatra toy ny horsepower, ny torolàlana fanamafisana na fahombiazana no zava-dehibe indrindra amin'ny fampiharana anao. Mandritra io dingana io, dia mety manapa-kevitra ianao fa mifanentana amin'ny boaty sy môtô ho mifanentana amin'ny filanao.
3. Fantaro ny hafainganana ny hafaingam-pandeha sy ny torapasaky ny enta-fiara.
Mba hahazoana antoka ny tranobominao dia aloa araka ny tokony ho izy, dia ilaina ny mahafantatra ny hafainganao famoahana entana, ohatra dc gear motor 100 rpm, manomboka sy milina torsiady. Ny fisafidianana ny motera moto mety dia olana amin'ny haingam-pandeha amin'ny haingam-pandeha (RPM) ary ny fanamafisana ny filan'ny fangatahana. Ny hafainganam-pandeha dia faritan'ny filàn'ny masinina ary tokony efa ho fantatra. Izany dia miala amin'ny fanombohana sy fihazakazahana tokony ho faritana. Aza hadino hatrany, rehefa misafidy milina misy alaharo efa namboarina ianao dia nanao ny ankamaroan'ny fananganana mavesatra mba ho azo antoka ny fiasan'ny môtô sy ny boaty.
Rehefa avy nanisa ny lakilanao sy fihazakazahana ianao dia ampiasao ny làlan'ny mpanamboatra vita amin'ny torolàlana, ny hafainganana ary ny fahombiazanao hahitana moto mifanaraka amin'ny filanao. Avy eo, avereno jerena ny famerana ny endrika mety misy ao anatiny, anisan'izany ny fanamoriana boaty vita amin'ny boaty (feno), ny hafainganam-pandehan'ny input, ny tanjaky ny boaty, ny toetran'ny rano ary ny tsingerin'ny adidy.
Rehefa mifidy milina fanoratana ianao dia zava-dehibe ny mitarika fitsapana maromaro mba hahazoana antoka fa mihodina tsara ny môtô amin'ny tontolo iainana mahazatra. Raha toa ka mafana ny motera dia tsy be loatra, na toa miady saina, avereno ilay fizotry ny fifidianan'ny mesa na mifandray amin'ny mpanamboatra.
Ny fandanianao ny fotoana hanamboarana ny fitaovanao anao dia hanampy anao hiantoka fa maharitra mandritra ny taona maro izany ary hiasa amin'ny fahombiazan'ny haingam-pandeha.
Aiza no hahitako ny The Economist?
Alefaso amin'ny mailaka izahay rehetra [email voaaro] ary hafindra amin'ny fitantanana anay izany. Hijery izy ireo ary hanome ny hevitrao. Ary avy eo, mety mila mifankahita isika hiresaka bebe kokoa.
Mifandraisa anay anio ary raiso voalohany ianao
Antsoy izahay sao misy quer
na mandefa mailaka anay ao
Ny serivisy tsara indrindra avy amin'ny manampahaizana mitondra hafatra mankany amin'ny boaty inbox mivantana.
Hamoaka ny hafainganam-pandeha
Famintinana ny vokatra
ANo.5 Lalana Wanshoushan Yantai, Shandong, Sina
© 2021 Sogears. Zo rehetra voatokana.